သတင်းပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ လာမယ့်ရာသီအသုံးပြုမယ့် မန်ယူအသင်း တတိယဂျာစီ
တတိယမြောက် ဂျာစီဒီဇိုင်း ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မန်ယူအသင်း
27 Apr 2018 . 3:27 PM
တတိယမြောက် ဂျာစီဒီဇိုင်း ပေါက်ကြားမှု ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့
လာမယ့် ၂၀၁၈-၁၉ ပြိုင်ပွဲမှာ အသုံးပြုမယ့် မန်ယူအသင်းရဲ့ တတိယမြောက် ဂျာစီဒီဇိုင်းပုံစံဟာ အသင်းက တရားဝင်မကြေညာခင်မှာပဲ
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်။ FootyHeadlines.com လို့အမည်ရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးနေ့က မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂျာစီဒီဇိုင်းပုံစံကို ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော် Adidas ကုမ္ပဏီက For the Oceans လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့နက်ပြာရောင် တတိယမြောက်ဂျာစီကို ပင်လယ်ထဲက စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်း တွေကို Recycle ပြန်လုပ်ပြီး တီထွင်ထုတ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာစီပေါ်မှာပါတဲ့ အသင်းလိုဂို၊ တံဆိပ်အားလုံးကို ရွှေရောင်နဲ့ ရေးထိုးသွားမှာဖြစ်သလို ဒေါင်လိုက် လှိုင်းတွန့်ဒီဇိုင်း တွေ ပါဝင်လာမယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဂျာစီဒီဇိုင်း ပုံစံတူဖြစ်တဲ့ Replicas ဂျာစီတွေကိုလည်း ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အန္တရာယ် လျော့နည်းသွားစေဖို့ အဲဒီကရတဲ့ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ် ပစ္စည်းတွေကိုပဲ အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲကနေ နှစ်စဉ် ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း မတ်ထရစ်တန်ချိန်ပေါင်း (၈)တန်ခန့် ထွက်ရှိနေပြီး ကမ္ဘာ့ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စွန့်ပစ်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုသွားမှာပါ။
The new shirt will be made from recycled ocean plastics as adidas commit to reducing waste
ဂျာမန်အားကစားပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော် Adidas ကုမ္ပဏီကတော့ သမုဒ္ဒရာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းစောင့်
ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း (parley for the Oceans)နဲ့ မိတ်ဖက်တွေဖြစ်တာကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်းက ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ဖိနပ်တွေကို
ပလတ်စတစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (parley for the Oceans) ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “For The Oceans” ဆောင်ပုဒ်ကို ဂျာစီရဲ့ လည်ပင်းကော်လံအတွင်းမှာ ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ဝင် ကလပ်အသင်းအချို့က လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမှာ ဝတ်ဆင်မယ့် ဝတ်စုံတွေကို ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် မန်ယူအသင်းကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကစားမယ့် ရာသီကြိုပြိုင်ပွဲတွေမှ တရားဝင် ဝတ်ဆင်ထုတ်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Adidas ကုမ္ပဏီက စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ တခြားထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းတွေဟာလည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အခုလိုဂျာစီ တွေကို ဝတ်ဆင်ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။
Aung Kyaw Wai(Akhayar)
တတိယျေမာက် ဂ်ာစီဒီဇိုင်း ပေါက်ကြားမျှုဖစ္ပြားခဲ့တဲ့
လာမယ့် ၂၀၁၈-၁၉ ပြိုင္ပြဲမွာ အသုံျးပုမယ့် မန်ယူအသင်းရဲ့ တတိယျေမာက် ဂ်ာစီဒီဇိုင်းပုံစံဟာ အသင်းက တရားဝင္မေကြညာခင္မွာပဲ
အြန္လိုင်းပေါ်မွာ ပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်။ FootyHeadlines.com လို့အမည်ရတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပေတးနေ့က မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂ်ာစီဒီဇိုင်းပုံစံကို ဖော်ျပခဲ့တျာဖစ္ပါတယ်။နာမည်ကေ်ာ် Adidas ကုမ္ပဏီက For the Oceans လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ မန်ယူအသင်းရဲ့နက်ျပာရောင် တတိယျေမာက္ဂ်ာစီကို ပင္လယ္ထဲက စြန့်ပစ္ပလတ္စတစ္ပစ္စည်း တြေကို Recycleျပန္လုပ်ပြီး တီထြင္ထုတ္လုပ်သြားမျွာဖစ္ပါတယ်။ ဂ်ာစီပေါ်မွာပါတဲ့ အသင်းလိုဂို၊ တံဆိပ်အားလုံးကို ရွှေရာင္နဲ့ ရေးထိုးသြားမျွာဖစ်သလို ဒေါင္လိုက် လှိုင်းတြန့်ဒီဇိုင်း တြေ ပါဝင္လာမယ္လို့ ဖော်ျပခဲ့ပါတယ်။ ဂ်ာစီဒီဇိုင်း ပုံစံတျူဖစ္တဲ့ Replicas ဂ်ာစီတြေကိုလည်း ပင္လယ်သမုဒ္ဒရာတြေထဲမွာ စြန့်ပစ္ပလတ္စတစ္ပစ္စည်းတြေရဲ့ အန္တရာယ် လေ်ာ့နည်းသြားစေဖို့ အဲဒီကရတဲ့ စြန့်ပစ္ပလတ္စတစ် ပစ္စည်းတြေကိုပဲ အသုံျးပုသြားမျွာဖစ္ပါတယ်။ ပင္လယ်သမုဒ္ဒရာထဲကေန နွစ္စဉ် ပလတ္စတစ္စြန့်ပစ္ပစ္စည်း မတ္ထရစ္တန္ခ်ိန်ပေါင်း (၈)တန္ခန့် ထြက်ရွိနေပြီး ကမ္ဘာ့ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို ကာကြယ္နိုင္ဖို့ စြန့်ပစ္ပလတ္စတစ္ပစ္စည်းတြေကို အသုံျးပုသြားမွာပါ။
ဂ်ာမန်အားကစားပစ္စည်း ထုတ္လုပ်ရေးကုမ္ပဏျီဖစ္တဲ့ နာမည်ကေ်ာ် Adidas ကုမ္ပဏီကေတာ့ သမုဒ္ဒရာပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းစောင့်
ရွောက်ရေးအဖြဲ့အစည်း (parley for the Oceans)နဲ့ မိတ္ဖက်တျြေဖစ္တာကြောင့် ၂၀၁၅ ခုနွစ္ကတည်းက ရေကူးဝတ္စုံနဲ့ ဖိနပ်တြေကို
ပလတ္စတစ္စြန့်ပစ္ပစ္စည်းတြေကေန ထုတ္လုပ်ပေးနေတျာဖစ္ပါတယ်။ (parley for the Oceans) ရဲ့ ဆောင္ပုဒ်ျဖစ္တဲ့ “For The Oceans” ဆောင္ပုဒ္ကို ဂ်ာစီရဲ့ လည္ပင်းက္လောံအတြင်းမွာ ပါဝင္မျွာဖစ္တယ္လို့ ဖော်ျပခဲ့ပါတယ်။ အခုအခ်ိန္မွာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင္ပြဲ ဝင် ကလပ်အသင်းအခ်ို့က လာမယ့် ဘောလုံးရာသီမွာ ဝတ္ဆင္မယ့် ဝတ္စုံတြေကို ထုတ်ျပန်ပြီျးဖစ်ပေမယ့် မန်ယူအသင်းကေတာ့ အေမရိကန္နိုင်ငံမွာ ကစားမယ့် ရာသီကြိုပြိုင္ပြဲတြေမွ တရားဝင် ဝတ္ဆင္ထုတ်ျပန်သြားမျွာဖစ္ပါတယ်။ Adidas ကုမ္ပဏီက စပြန္ဆာပေးထားတဲ့ တျခားထိပ်သီးအသင်းတျြေဖစ္တဲ့ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ်အသင်းနဲ့ ဘိုင်ယန်ျမူးနစ်အသင်းတြေဟာလည်း ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွာ အခုလိုဂ်ာစီ တြေကို ဝတ္ဆင္ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။
by Zawyè .2weeks ago
by 2B . 1 month ago
by Lwin Moe Htike .2months ago